1. Hubi shaqaalaha in loo tababaray isticmaalka iyo isticmaalka habboon ee bateriga. Had iyo jeer xiro qalabka ilaalinta shakhsiyeed ee saxda ah (PPE) markaad maareyn karto batariyada.
2. Baadhitaanka dayactirka bateriga waa in sidoo kale la dhammaystiraa iyadoo qayb ka ah kormeerka dayactirka joogtada ah.
3. Had iyo jeer xiro PPE habboon markaad qabato qalabka korontada. Haddii lagu xoqay elektaroolitiga, isla markiiba biyo ku nadiifi biyo nadiif ah oo raadso talo caafimaad.
4. Weligaa ha ku darin sulfuric acid aan baqdin galin bateriga.
5. Ka ilaali beteriyada si toos ah si aad uga hortagto foosha elektariyaha. Electrolyte waa sulfuric acid dilaacay oo waxyeello u leh maqaarka.
6 . Isticmaal qalabyada wax lagu xakameyn karo marka la jarayo ama la xirayo bateriga. Waligaa ha dhigin aaladaha ama biraha walxaha ku jira terminaalka bateriga.
7. Inta lagu jiro xukunka, batteriga wuxuu bixiyaa gaasaska qarxa. Badi batteriga ku hay meel hawo wanaagsan leh iyo meel ka baxsan olol iyo qamaar. Sigaarcabka sidoo kale waa mamnuuc.
8. Jenerayaha ayaa la dhigay Bateriga, sharciga, waa in aan lagu tuurin qashinka guryaha.
Bateriga waxaa ku jira maaddooyin halis ah oo ku jira gobolka oo idil, mid kasta oo ka mid ah waxa uu ka kooban yahay electrodes of lead metal (Pb) iyo lead (IV) dioxide (PbO2) ee elektirito ah oo ku saabsan 33.5% w / w (6 Molar) sulfuric acid (H2SO4). Goobta laga saaro labadaba electrodes waxay u beddeshaa sunta (II) sulphate (PbSO4) iyo elektaroolka ayaa lumisa sulfuric acid kala badh oo wuxuu noqonayaa midda biyaha ugu sareysa. Waxaa dhici karta in uu waxyeelo u geysto deegaanka si uu ugu soo diro goobaha qashin-qubka, gubidda bateriga ayaa sidoo kale keeni kara wasakheynta atmospheric. Wax ka qabashada batariyada acid leedhka waxay noqon kartaa halis sidaa daraadeed waa muhiim inaad raacdo dhammaan tilmaamaha badbaadada.
Batariyadu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah qalabka korontada si loo ilaaliyo habboon. Aaladda batroolka ah nadiifi oo qallaji oo hubso in furaha daboolka ay adag yihiin (haddii la rakibo).
Ku nadiifi kaysarka batroolka mid ka mid ah xalalka nadiifinta ee soo socda:
• Isku dar ah 0.1 kg (0.2 lb) oo baking soda ah iyo 1 L (1 qt) oo biyo nadiif ah
• Isku dar ah 0.1 L (0.11 qt) ammonia iyo 1 L (1 qt) biyo nadiif ah
Si fiican u biyo raaci kiiska batroolka.
Dhamaan xidhiidhiyeyaasha batariga waa in la nadiifiyaa oo la adkaystaa. Isticmaal fasal ganaax ah oo waraaqo xoqan ah si aad u nadiifiso terminaalka iyo kabriidka kabriidka. Kala saar alaabta ilaa inta dusha sare ee dhalaalaya ama dhalaalayo. Ha ka saarin maaddooyinka xad-dhaafka ah. Ka saarida xad dhaafka ah ee maaddada korontada si ay uga hortagaan qashinka.
Heerka elektarooligga waa in uu daboolaa taarikada / taakuleenta (1/2 inji / 13 mm) gudaha batroolka si loo xoojiyo bedelka buuxda. Haddii heerkulka dareeruhu ka hooseeyo saxarada / daboolka, kaliya ku dar biyo diirran; marnaba ha ku darin aaladda batroolka si kor loogu qaado mugga, maaddaama lagu daro aashitada dheeraadka ah waxay burburin doontaa boogaha.
Waxaa lagu talinayaa in la hubiyo elektarooriga iyo xaaladda bateriga mar kasta oo 500 saacadood ah. Xaaladaha khaaska ah ee sareeya, waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo magdhowga kulaylka iyo in la eego heerarka elektaroonigga ah inta badan, tusaale ahaan 200 saacadood oo shaqo ah. Baadhitaanadan waa in sidoo kale la buuxiyaa iyada oo qayb ka ah baaritaannada joogtada ah ee dayactirkaaga.
Akhrinta la xidhiidha: Silent Diesel Generator , Ricardo Diesel Generator